सन्दिप र सोमपालबीच झन्डै भिडन्त, कारण सुन्दा सबै चकित, यसरी टर्यो झडप — Sanchar Kendra
काठमाडौं । सन्दिप लामिछाने र सोमपाल कामी नेपाली क्रिकेट टिमका प्रभावशाली सदस्य हुन् । दुबैले आफ्नो क्रिकेट करिअरमा विशेष छाप दिएका छन् । हाल दुबै जना आइसीसी टि–२० विश्वकपको एसिया छनौटका लागि सिंगापुरमा रहेका छन्। आइतबार नेपाली टोलीले सिंगापुरमा नराम्रो पराजय व्यहोरो । सिंगापुरमा नेपाली टोलीसँगको पराजयसँगै नेपाली टोलीको विश्वकप खेल्ने सपना चकनाचुर भयो । त्यतिमात्र होइन, सिंगापुरमा हार व्यहोरोपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली केही समयका लागि तितरवितर हुने भएको छ । यही क्रममा आइतबार नै नेपाली क्रिकेट टोलीका दुई सदस्य सन्दिप र सोमपाल सिंगापुरबाट क्यानडा लागेका छन् । र, उनीहरुबीच क्यानडा गए लगत्तै झण्डै भिडन्त हुने सम्भावना रहेको थियो । तर, त्यो भिडन्त बालबाल टरेको छ ।
यी दुईबीच साँच्चिकैको मुक्केवाजी भिडन्त भने हुने होइन । उनीहरु दुबै जना फरक फरक टोलीबाट खेल खेल्न क्यानडा गएका छन् । उनी दुबै जना आवद्ध रहेका दुई क्लब. सोेमवार भिड्ने तालिका थियो । अहिले क्यानडामा ग्लोबल क्यानडा टि–२० लिग चलिरहेको छ । सोही लिग अन्तर्गत सन्दीप र सोमपाल आवद्ध टोली सोमवार भिड्ने कार्यतालिका छ । युवा स्पिनर सन्दीप क्यानडाको टोरोन्टो नेशनल्समा आवद्ध भएका छन् । उनलाई टोरोन्टोले यस सिजनमा ६० हजार अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको छ । त्यस्तै सोमपाललाई क्यानडाकै विनिपेग हक्सले आवद्ध गराएको छ । सोमपाललाई उक्त क्लबले ३ हजार अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको हो। यसअघि सोमवार नै सन्दीप र सोमपाल दुबै क्यानाडा खेल्ने कार्यतालिका भएकोले उनीहरुबीच भिडन्त हुने पक्कापक्की रहेको बताइएको थियो । तर, उनीहरु सोमवार बिहान मात्र पुग्ने र सोमवार आराम गरेर मंगलबारबाट मात्र प्रतियोगिताका लागि उपलब्ध हुने बताइएको छ ।
सन्दीप र सोमपाल खेल्न नपाए पनि उनीहरु आवद्ध रहेका दुई क्लबबीच भने सोमवार भिडन्त हुने भएको छ । सोमबार सन्दीपको टोरोन्टो र सोमपालको विनिपेग एकआपसमा भिड्न लागेका हुन्। यसअघि सन्दीप आवद्ध रहेको टोरोन्टो क्लब उद्घाटन खेलमा पराजित भएको थियो र दोस्रो खेल जितेको थियो। त्यस्तै सोमपालको विनिपेग पहिलो खेलमा मोन्ट्रोरियल पनि टाइगर्स क्लबबाट पराजित भएको थियो। विनिपेगको अर्को खेल आइतबार भेन्कुवभर नाइट्ससँग हुने बताइएको छ। सोमबार विनिपेगले सन्दीपको टोरोन्टोको सामना गर्नेछ। अंकतालिकामा दुई खेल खेलेको सन्दीपको टोरोन्टो एकमा जित र एकमा हारसहित २ अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै एक खेलमा हार ब्यहोरेको सोमपालको विनिपेग पुछारमा छ।
ग्लोबल टि-२० क्यानडा अन्तर्गत आइतबार राति सम्पन्न २ वटा खेलमा ब्राम्पटन वुल्भ्स र विन्निपेग हक्स विजयी भएका छन्। दोश्रो जित सहित ४ अंक बटुल्दै वुल्भ्स अंकतालिकाको शिर्ष स्थानमा उक्लेको छ भने हक्स २ खेलमा १ जित र १ हार सहित २ अंक सहित दोश्रो स्थानमा उक्लेको छ। शाहिद अफ्रिदीले उत्कृस्ट ब्याटिंग गरे पछि ब्राम्पटन वुल्भ्सले एडमोन्टन रोयल्सलाई २७ रनले पराजित गर्यो। पहिले ब्याटिंग गरेको ब्राम्पटनले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २०७ रन बनाएको थियो। जवाफमा एडमोन्टनले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १८० रन मात्र बनाउन सक्क्यो। एडमोन्टनको लागि जेम्स निशमले सर्वाधिक ३३ रन, रिची बेर्रींगटनले २८ रन, शदाब खानले २७ रन बनाए। सफ्यान सरिफ र कायल फिलिपले अविजित समान १८ रन बनाए पनि जितसम्म पुर्याउन सकेनन्। वुल्भ्सका बलर जहुर खान र इश सोढ़ीले ३/३ विकेट लिए।
यस अघि पहिले ब्याटिंग गर्ने क्रममा शाहिद अफ्रिदीले विस्फोटक ब्याटिंग गर्दै ४० बलमा १ चौका र ५ छक्का मदतले अविजित ८१ रन बनाएका थिए। यस्तै लेन्डल सिमोन्सले ३४ बलमा ५९ रन बनाए। उनले समान ५/५ चौका र छक्का प्रहार गरे। पहिले ब्याटिंग गर्दै भानकुभर नाइट्सले दिएको २०९ रनको लक्ष्य विन्नीपेग हक्सले १५.२ ओभरमा ३ विकेट मात्रै गुमाएर पुरा गर्यो। जेपी डुमिनिले अविजित ७७ तथा क्रिस लिनले ७४ रन बनाए। डुमिनिले ३८ बलमा ७ चौका र ५ छक्का तथा लिनले ३४ बलमा ४ चौका र ७ छक्का प्रहार गरे। १५ रनमा २ विकेट गुमाएको अवस्थामा लिन र डुमिनिले तेश्रो विकेटको लागि १४३ रनको साझेदारी गरेका थिए। यस अघि भानकुभरको ब्याटिंगमा कप्तान क्रिस गेलले सर्वाधिक ४५ रन बनाउन २७ बलमा ७ चौका र २ छक्का प्रहार गरेका थिए। यस्तै रस्सी भान डर डुसेनले ३९, चाडविक विल्टनले ३० तथा शोयब मालिकले अविजित २८ रन बनाएका थिए। हक्स बलर तथा कप्तान रायद इमरिटले ३ विकेट लिए।
त्यस्तै टि-२० विश्वकप छनौट यात्रा टुंगिएपछि नेपाली क्रिकेट टिमका फ्यानहरु निराश हुँदै सामाजिक संजालमा प्रतिक्रिया दिईरहेका छन्। टिम र खेलाडीहरुलाई गालि गर्दै फ्यानहरुले सामाजिक संजाल भरिरहंदा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुर्व कप्तान बिनोद दासले नेपाली खेलाडीहरुलाई गालि नगर्न आग्रह गर्दै ट्वीट गरेका छन्। टि-२० विश्वकप छनौटमा नेपालले पहिलो खेलमा कतारसंग पराजित भए पछि मलेसिया र कुवेतलाई पराजित गरेको थियो। चौथो खेलमा सिंगापुरलाई पराजित गरे नेपाल युएईमा अक्टोबरमा आयोजना हुने टि-२० विश्वकप छनौट हुन्थ्यो। २०१४ मा टि-२० विश्वकप छनौट भएको नेपाल त्यसपछि २०१६ को टि-२० विश्वकप छनौट हुन पनि असफल भएको थियो।
“खेलाडीहरुले जति पिंडा अरुले महसुस गर्दैनन्। हामीले हार पछि खेलाडीहरुको जीवन र शरीरलाई अघि ल्याएर गालि गर्छौं र १-२ दिनमा बिर्सन्छौ। तर खेलाडीहरुले यही असफलता लिएर जीवन बिताउनु पर्छ। कृपया उनीहरुलाई अपमान गर्न रोक्नुस” यति लेख्दै दासले ह्याशट्याग प्रयोग गर्दै “तपाईको योगदान के” #whatsurcontribution लेखेका छन्।दासले ट्वीटरमा पोस्ट गर्दै खेलाडीहरुको पक्षमा प्रतिक्रिया दिएका हुन्। यस अघि नेपालले कतारसंग पहिलो खेलमा हारे पछि दास आफैले नेपाली टिमलाई प्रश्न उठाएका थिए। दासले थप लेख्दै समर्थकलाई हार स्वीकार्न सिक्नु पर्ने नत्र टिमलाई समर्थन गर्न छोड्न आग्रह गरेका छन्” “यदी तपाईले हार स्वीकार्न सक्नु हुन् भने नखेल्नुस र खेलकुद टिमलाई नपछ्याउनुस। स्वतन्त्र भएर आलोचना गर्नुस तर सौहार्दपूर्ण तरिकाले र जायज प्रश्न खडा गरे।
यसैबिच अन्तिम खेलमा सिंगापुरसँग पराजित भएपछि नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्काले माफी मागेका छन् । खेलपछि कुरा गर्दै कप्तान पारसले छनौट प्रतियोगितामा आफुहरु राम्रो नखेलेको बताउदै नेपाली क्रिकेट समर्थकहरुसँग माफी मागेका हुन् । पारसले विश्वकप खेल्ने सपना भएपनि आफुहरु आफ्नो क्षमता अनुसार खेल्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । पारसले भने,’धेरै जनाको सपना थियो । खेलाडीहरुले धेरै मेहनेत गरेका थियौ तर सोचे जस्तो भएन ।’ यस प्रतियोगितामा सबै टिम राम्रो खेलेको भन्दै आफुहरु एकदिवसीय स्ट्याटस रहेकाले आउदो दिनमा राम्रो खेल्ने आशा व्यक्त गरे । खेल हारेपछि खेलाडीको, कप्तानको, प्रशिक्षकको आलोचना हुनु स्वभाविक भएको भन्दै आफुहरु यस प्रतियोगितामा डोमिनेट गरेर खेल्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । कप्तान पारसले आउदा दिनमा अझै मेहेनत गरेर अगाडी बढ्ने बताउदै कप्तान पारसले नयाँ प्रशिक्षक आएर टिममा धेरै सुधार भएको बताए । तुरुन्तै रिजल्ट राम्रो नआए पनि दिर्घकालमा टिमलाई फाइदा हुने दाबि गरे । हामीले आउदा दिनमा जिम्मेवारी अनुसारको क्रिकेट खेल्नुपर्ने बताउदै यस प्रतियोगितामा भएका कमि कमजोरीलाई आउदा दिनमा सुधार्ने बताए ।
यस्तै नेपाली अन्डर-१९ क्रिकेट टिमका पुर्व क्रिकेटर देब्रे हाते स्पिनर सुशील कंडेलले आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गर्दै नेपालले सिंगापुरसंग हार्नुको पछाडी बलिंग र कप्तानीलाई दोष दिएका छन्। “प्रतियोगितामा नेपाली स्पिनरको निकै खराब बलिंग। फाइनलमा ( सिंगापुरसंग ) निकै खराब कप्तानी। म कसैलाई आलोचना गरिरहेको छैन तर तपाई ओभरमा ४ फुलटस बल गरेर राष्ट्रिय टिममा पर्न योग्य हुनुहुन्न। नेपाली क्रिकेटलाई भगवानले रक्षा गरुन्।” हाल जापानमा रहेका कंडेलले लेखेका छन्। “नेपाललाई क्रिकेटमा दूरदर्शी व्यक्तित्वको खाँचो रहेको छ। हामीले यदी अहिले पाठ सिकेनौ भने भविष्यमा अझ मुस्किल हुनेछ। मेरो अनुरोध खेलाडी र व्यवस्थापनलाई यो छ कि स्वार्थी हुन छाड्नुस। यदी यो सुधार भए भने यो बारम्बार दोहोरिनेछ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट”
त्यस्तै सिंगापुरमा नेपाली क्रिकेट टिमले दोहोरो पीडा भोग्नु परेको छ । आयोजक सिंगापुरसँग ८२ रनले हारेपछि नेपाल टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा पुग्न सकेन । यो नेपाली टोलीका लागि ठूलो झड्का थियो । अर्को झड्का त्यसबेला लाग्यो, जब उपविजेताको पदक खोसियो । आयोजकले सुरुमा नेपाललाई उपविजेता घोषणा गर्दै सबै खेलाडीलाई मेडल लगाइदियो । सुरुमा अविनाश बोहोरा गए, त्यसपछि कप्तान पारस खड्का । अरुले पालैपालो उपविजेताको मेडल लगाए । त्यसपछि विजेता सिंगापुरका खेलाडीहरुलाई मेडल दिइयो । सिंगापुरका खेलाडीहरुले ट्रफी उचाले । जब नेपाललाई ट्रफी दिने बेला आयो, नेपाली खेलाडीहरुले घाँटीमा लगाएको मेडल पनि खोसियो । समान ४-४ अंक भएपनि कतार रन रेटका आधारमा अगाडि रहेको र नेपाल तेस्रो भएको घोषणा गरियो ।
नेपाली खेलाडीहरुको मेडल टिम म्यानेजर रमन सिवाकोटीले एकमुष्ट फिर्ता गरेका छन् । प्रतियोगिताको उपविजेता कतार नै हो । तर सुरुमा हतारमा नेपाललाई उपविजेता घोषणा गर्दै खेलाडीलाई मेडल लगाउनु आयोजकको गल्ती थियो । आयोजकले गल्ती विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा पुग्न नसकेको पीडामा रहेका नेपाली खेलाडीहरुलाई आलो घाउमा नुनचुक छरे जस्तै सावित भयो । त्यस्तै सिंगापुरसँग फराकिलो हारसँगै टी-२० विश्वकप खेल्ने सपना बीचमा नै टुटेपछि नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले भनेका छन्, ‘आज हाम्रो दिन थिएन ।’ टी-२० विश्वकपको एसिया फाइनलमा नेपाल सिंगापुरसँग ८२ रनले हारेको छ । खेलपछि कप्तान पारसले सिंगापुरले राम्रो ब्याटिङ गरेको बताए ।
यद्यपि टी-२० विश्वकप वा ग्लोबल छनोट खेल्ने सपना खेख्ने टिमले १९२ रनको लक्ष्य भेट्टाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘हामीले राम्रो खेलेनौं । उनीहरुले राम्रो गरे ।’ उनले अघि भने, ‘आज हाम्रो दिन थिएन ।’ सिंगापुरलाई के सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले एशोसिएट टिमका लागि एक दिन निराशा र अर्को दिन खुसी आउने भन्दै निरन्तरता राम्रो क्रिकेट खेल्नुपर्ने बताए । त्यस्तै ग्लोबल छनोटमा पुग्न असफल भएपछि स्पीनर सन्दीप लामिछानले निराशा व्यक्त गरेका छन् । एसिया फाइनलको अन्तिम खेलमा सिंगापुरसँग ८२ रनले पराजित भएपछि नेपाल अघिल्लो चरणमा पुग्न सकेन । खेलपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका सन्दीपले रिजल्ट निकै निराशाजनक भएको बताए । सिंगापुरले निकै राम्रो क्रिकेट खेलेको भन्दै उनले भने, ‘बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङ सबैमा हामीले भेट्टाउन सकेनौं ।’
नेपालको कमजोर ब्याटिंग, तासको पत्ता झैँ ढल्यो नेपालीको इनिंग
लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले आक्रामक सुरुवात गर्यो। तर चौथो ओभरमा पारस खड्का १२ रन बनाएर आउट भए पछि भने नेपालले लगातार विकेट गुमाउन पुग्यो। पारसले १० बलमा १ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र मल्ल २१ बलमा ४ चौका र ३ छक्का मदतले सातौँ ओभरमा ३९ रन बनाएर आउट भए। त्यसपछि शरद ७, रोहित पौडेल, ५, बिनोद भण्डारी ९ तथा करन केसी खाता नखोली आउट भए। त्यसपछि सोमपाल कामि र दिपेन्द्र ऐरीले साझेदारी बनाउने संकेत देखाए पनि सोमपाल १३ औं ओभरमा १० रन बनाएर रन आउट हुन पुगे। लगत्तै सन्दिप पनि खाता नखोल्दै आउट भए। एक किनार सम्हालीरहेका दिपेन्द्र ऐरी २२ बलमा १ चौका र १ छक्का बनाएर नवौं विकेटको रुपमा १५ औं ओभरमा आउट भए। सोहि ओभरमा अविनाश बोहरा पनि खाता नखोली आउट हुँदा नेपाल अल-आउट हुन् पुग्यो। सिंगापुर बलर भिजयकुमारले सर्वाधिक ४ विकेट लिए। यस्तै बस्करनले २ तथा जनक प्रकास, अमजद महबुब र ए कृष्णले १/१ विकेट लिए।
त्यस्तै खेलमा टस जितेर सिंगापुरले पहिले ब्याटिंग गर्दै २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १९१ रनको योगफल तयार गर्दै नेपाललाई १९२ रनको लक्ष्य दिएको छ। टि-२० अन्तर्राष्ट्रियमा कुनै पनि टिमले नेपाल बिरुद्ध बनाएको यो सबैभन्दा ठुलो योगफल हो। यस अघि नेदरल्याण्डले गत वर्ष १७४ रन बनाएको थियो। त्यो खेल वर्षाले पुरा हुन पाएको थिएन जुन क्रममा १६.४ ओभरमा नेदरल्याण्डले उक्त योगफल तयार गरेको थियो। ओपनर सुरेन्द्रन चन्द्रमोहनलाई दोश्रो ओभरमा करन केसीले आउट गरेपछि दोश्रो विकेटको लागि सिंगापुर ब्याट्सम्यान रोहन रंगराजन र टिम डेभिडले दोश्रो विकेटको लागि ८९ रनको ठुलो साझेदारी गरे। ११ औं ओभरमा अविनाश बोहराले रंगराजनलाई क्क्याच आउट गर्दै दोश्रो विकेट दिलाए। उनले ४९ रन बनाउन ३३ बलमा ४ छक्का र ३ चौका प्रहार गरे। त्यस पछि पनि डेभिडले एक किनार सम्हालीरहे जसलाई मनप्रित सिंहले साथ दिए। दुवैले तेश्रो विकेटको लागि ६६ रनको साझेदारी गरे।
अविनाश बोहराले ७७ रन बनाएका डेभिडलाई अठारौं ओभरमा क्याच आउट गर्दै नेपाललाई राहत दिलाए। उनले ४३ बलमा ८ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे। त्यसै ओभरमा बोहराले खाता नखोल्दै चेतन सूर्यवंशीलिई पनि आफ्नै बलमा आफैले क्याच आउट गरे। त्यस पछि ४२ रन बनाएका मनप्रितलाई करन केसीले क्याच आउट गरे। २७ बलमा उनले ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे। इनिंगको अन्तिम ओभरमा अविनाश बोहराले मात्र ६ रन खर्चेर १ विकेट लिए। नेपालको बलिंगमा अविनाश बोहराले सर्वाधिक ४ विकेट लिए जुन क्रममा ४ ओभरमा ३५ रन खर्चिए। नेपालको लागि टि-२० अन्तर्राष्ट्रियमा यो दोश्रो उत्कृस्ट बलिंग फिगर हो। बसन्त रेग्मीले टि-२० विश्वकप २०१४ मा हंगकंग बिरुद्ध ४ विकेट लिंदा ४ ओभरमा १६ रन मात्र खर्चिएका थिए जुन उत्कृस्ट बलिंग फिगर हो।
एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग भएर जाने प्रचण्ड-नेपाल समूहको निर्णय
मेरो पार्टी कुन हो, अदालतलाई सोध्नू- प्रधानमन्त्री ओली
यस्तो हुनेछ आगामी आव २०७८/७९ को बजेट ?
महिला हिंसाका घटनाबाट देश मुक्त हुन सकेको छैन- शेरबहादुर देउवा
सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेपछि अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले दिए यस्तो प्रतिकृया, ओली-प्रचण्डलाई के भने ?
ओली-प्रचण्डको पार्टी खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला
कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको ३ लाख ४८ हजार खोप आज नेपाल ल्याइँदै